ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 | 10 ၏စာမျက်နှာ 38 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဖေဖေါ်ဝါရီလ (စာမျက်နှာ 10)
လစဉ်မော်ကွန်း: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2015
4K ဆိုတာဘာလဲ မျက်နှာပြင်အောက်ကိုတူးနှင့်သင်မကြာမီအတိုကောက်, နံပါတ်နှင့်မဖြေရှင်းနိုင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံတစ်ဝင်္လှန်။ Adrian Pennington နည်းပညာများ၏လက်ရှိပြည်နယ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ရင်းမြစ်: www.avinteractive.com Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
NAB Show မှာ IABM သင်တန်း
အစဉ်အဆက်တို့သည် IABM သင်တန်းအကယ်ဒမီ2လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများနှင့်အတူ NAB မှာသင်တို့ဆီသို့လာမယ့်ပါလိမ့်မည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့> t.co/4rJQ1towqH #NABShow ရင်းမြစ်: www.theiabm.org Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
အိန္ဒိယတွင်ကြည့်ရှုသူများသည်မှ Video On Demand ကိုယူခဲ့ဖို့အမြင်အာရုံစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
ဦးဆောင် OTT ဖြေရှင်းချက်ပေးသူ Visual စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်းဝယ်လိုအားဝန်ဆောင်မှုအပေါ်တစ်ဦးပြည့်စုံဗီဒီယိုကယ်နှုတ်တော်မူကူညီရန်တာဝန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ရုံအားပေးဖို့ 1975 ၌တည်သည် NFDC ၎င်း၏ "ရုပ်ရှင်ရုံအိန္ဒိယ" တံဆိပ် (YouTube ပေါ်မှာလက်ရှိအချိန်တွင်သာရရှိနိုင်ပါ) အရ VoD ကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြန့်ဝေအားဖြင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းက၎င်း၏ကြည့်ရှုမှုကိုချဲ့ထွင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒီအ ...
သတင်းအချက်အလက်ဝင်ရောက်ဖို့ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းလမ်းအသစ်များကို၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုမသေချာမရေရာအနာဂတ်နှင့်အတူရေဒီယိုများ၏အလတ်စားကျန်ကြွင်းစေပြီ။ ရေဒီယိုကယနေ့ပြုလုပ်ရပ်အဖြစ်, ရေဒီယိုကျန်းမာ ... ရင်းမြစ်ထဲမှာဖြစ်ပါသည်: Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ www.scoop.it - ​​အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
ထိပ်တန်း3ခုနှစ်တွင်-Demand ရေဒီယိုဂျော့ဘ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ချိတ်ဆက်ကမ်ဘာပျေါတှငျရေဒီယိုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အနာဂတ်ကဘာလဲ? အထူးသဖြင့်သုံးအလုပ်အကိုင်များအခုအချိန်မှာဝယ်လိုအားအဖြစ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်နှင့်ရေဒီယိုက၎င်း၏ 100th တစ်ဦးက ... ရင်းမြစ်ကျင်းပအဖြစ်ဝယ်လိုအားနေဆဲဖြစ်သည်ကြည့်ရှု: Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ www.scoop.it - ​​အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
စမတ်တီဗီသို့မဟုတ်မီဒီယာ streamer? CNET မှတစ်ဦးကမီဒီယာ streamer ဒါအပေါ် Roku, Apple TV, Chromecast ကို, အမေဇုံမီးသတ်တီဗီနှင့်တူသောအရာဖွစျသညျ။ သူတို့ကသင့် TV ရန်အင်တာနက်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာကွန်ရက်ကနေ content တွေကို streaming ၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းကိုသာဖြစ်ကြသည်။ ရင်းမြစ်: Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ www.scoop.it - ​​အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
Codex ARRI Alexa MINI များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအသွားအလာဘဝမှကယျတငျ
Codex (www.codexdigital.com), ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံနှင့်တီဗီထုတ်လုပ်မှုများအတွက် High-end ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံဖမ်းခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တခါထပ် Alexa မိသားစုမှတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုထို့အပြင်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာသည့်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ARRI နှင့်အတူပူးပေါင်းထားပါတယ် - ထို Alexa Mini ကို။ "နောက်တကြိမ်, ARRI သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်လိုချင်တာတွေနားထောင်ပြီးလာ Codex နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် ...
trilogy ပာ CABSAT 2015 မှာထိန်းချုပ်မှု၌တည်ရှိ၏
CABSAT 2015, ခန်းမ 2, 201 ရပ်, ဒူဘိုင်း 10-12 မတ်လ 2015: Trilogy ဆက်သွယ်ရေး, စတူဒီယို, post ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးဖြေရှင်းနည်းများနှင့် SPG ရဲ့အခြေစိုက်စံချိန်စံညွှန်းများ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးအိုင်ပီ-based အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှု featuring ဖြစ်ပါတယ် နှင့် CABSAT 2015 မှာထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဤအတီထွင်မှုတို့တွင်အချုပ် turn နိုင်သည့် Trilogy ရဲ့အသစ်ဖြန့်ချိ Virtual Control Panel ထဲကဆော့ဖ်ဝဲ, ဖြစ်ပါတယ် ...
10 ၏စာမျက်နှာ 38«ပထမဦးစွာ...«89101112 » 2030...နောက်ဆုံး»